Cuntada Puto, mid ka mid ah waxyaabaha ugu macaan ee Filibiin | Safarka Absolut
Qaar badan oo safar ah oo booqanaya FilipinasDadka Isbaanishka ku hadla, gaar ahaan, waxay la yaabaan magaca mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan ee gastronomic ee dalka: the cunug. Waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan wax aad u wanaagsan, laakiin dhab ahaantii waa cunno aad loo jecel yahay oo dhadhan fiican leh oo mudan in la isku dayo.
Kuwaas keeg bariis oo khafiif ah Badanaa waxaa loo adeegaa sidii wehel u ah suxuun dhaqameedyo badan, in kasta oo iyagana loo geeyo shaah iyo faleebooyin kale. Waxaa lagu kariyaa oo lagu cunaa ku dhowaad dhammaan gobollada dalka.
1 Sida loo diyaariyo wasmada
1.2 Diyaarinta keega
2 Noocyada nuujinta
2.1 Bagas fucking
2.3 Farxad lusong
2.4 Maya fucking
Sida loo diyaariyo wasmada
Bariis, sida ay ugu dhacdo cuntooyin kale oo fara badan oo ka mid ah cunnooyinka kala duwan ee Aasiya, waa aasaaska fucking. Cunto kariyeyaasha Filibiin waxay xirtaan a bariis kala dheer si aan mugdi ku jirin u xasuusinaya basmati. Bariiska waxaa loo qooyay habeenki si uu u jilco oo u yara khafiifiyo. Qaar ka mid ah khamiirka ayaa sidoo kale badanaa lagu daraa caawinta hawshan.
Ka dib maalin dhan biyo, bariiska waa la shiiday si loo sameeyo bur la yiraahdo galapong. Dhaqan ahaan shiidiintan waxaa lagu fulin jiray dhagax-shiid. Maalmahan, dhanka kale, ku dhowaad dhammaan dukaamada waaweyn ee dalka aad horay u iibsan karto galapong diyaariyey.
Diyaarinta Galapong si loo sameeyo keega puto
In kasta oo ay jiraan noocyo badan oo puto ah (oo aan gadaal ka arki doonno), qaaciddada dhaqameed ee dhaqanka waxaa lagu diyaariyey maaddooyinka soo socda:
4 koob oo bur bur ah (galapong).
2 koob oo sonkor ah.
2 qaado oo budada dubista ah.
2 koob oo caano ah (sidoo kale waxay noqon kartaa caano qumbaha).
2 ama 3 koob oo biyo ah
Nus koob oo sabdo dhalaalay.
Qaado badhkeed oo vanilj ah.
Ikhtiyaari ah: midabaynta cuntada iyo qaaddo macaan oo tapioca ah.
Kuwani waa tallaabooyinka la raacayo si loogu diyaariyo keegaggan yar yar ee macaan:
Marka hore waa inaad kala sifee waxyaabaha qalalan (bur bariis iyo sonkor) kuna shub baaquli weyn.
Kuwa soo socda ayaa lagu daray maaddooyinka qoyan (caano, ukun iyo biyo). Waxaad si fiican u garaacday wax walba ilaa aad ka hesho a isku dhafka labiska. Tani waa halka lagudaro tubioca si loo gaaro a jilicsanaanta gelatinous, iyo midabaynta.
Waxaan diyaarinaa kuwa yaryar wasakhooyinka (Waxay u adeegi karaan isla kuwa loo isticmaalo diyaarinta keega), sifiican ugu faaf subagga.
Isku dar ah ayaa lagu shubay caaryada, iyaga oo buuxinaya kaliya wax yar oo ka sarreeya kala badh. Qayb ka mid ah farmaajada ayaa lagu daraa dusha sare.
Qaababkii la buuxiyey ayaa la dhigaa uumiyaha, meesha kari ilaa 20 daqiiqo. Haddii aadan haysan uumiyaha waxaad isticmaali kartaa foorno caadi ah, 10 daqiiqo 180 atC.
Marka la kariyo, keega qabow daqiiqado yar intaadan kala bixin.
Waa in loogu adeegaa kuleyl, inkasta oo markii loo isticmaalo macmacaan ama kafee sidoo kale loo siin karo qabow.
La uumiyaha taas ayaa loo isticmaalaa in lagu kariyo puto waa aalad dhaqameed jikada Filibiin la yiraahdo putuhan. Uumeeyaha noocan ah wuxuu ka samaysan yahay silsilado bir ah iyo bambooyin sameeya weel wareegsan. Muuqaalkiisu wuxuu lamid yahay kan dambiilaha Shiinaha ee sum sum, inkasta oo uu ka weyn yahay. Daboolka, oo sidoo kale laga sameeyay bamboo, ayaa qaabdhismeedka qaabdhismeedka u oggolaanaya uumiga uumiga inuu ku daadanin keega.
Gobollada dalka qaarkood salka uumiyaha ayaa lagu daboolaa caleemaha mooska, iyadoo leh fikrad ah in caraf udgoonkeedu uu digayo buskudka.
Keegga Puto waxaa badanaa lagu qaataa dhammaan noocyada kala duwan labiska: jiis, ukumo la kariyey, subag, hilib doofaar, qumbaha la shiiday ... Marka laga reebo tan, waxaa jira liis aad u dheer oo noocyo goboleedyo ah iyo qaabab kala duwan oo loogu diyaariyo cunnadan dalka oo dhan. Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu caansan uguna xiisaha badan:
Caadiga u ah gobolka ee Bicol. Koobabyada duudduuban ayaa duugta muddo dheer illaa inta ay kareyso. Sidoo kale aaggan dalka waa musqusha wasmada, kaas oo ka buuxsamay qumbaha macaan.
Waa hab dhaqameedka dhaqanka ee Navidad oo sharraxaaddiisa loo adeegsaday bariis pirurutong, gaar ahaan lagu aqoonsan karo midabkiisa guduudka ah iyo dhejiska dhejiska leh. Nooca noocan ah ee loo yaqaan 'puto' waxaa lagu qooyay biyo cusbo leh waxaana lagu keydiyey tiirarka bamboo ka hor inta aan lagu darin dusha sare ee subagga.
Kaladuwan dhaqameed ee Pampanga, gobolka dhexe ee jasiiradda Luzon. Waxay soo bandhigaan waxyaabaha gaarka ah ee wasakhda ay ku diyaar garoobeen ay yihiin laba jibbaaran keegagana ay leeyihiin dhadhan anise.
Waa kan Desayuno dhaqameed ee Gobollada ku hadla Cebuana. Caano sanjabiil ah ayaa lagu darayaa isku darka qadiimiga ah waxaana lagu soo rogay a rasaas labaad. Keegga ayaa leh qaab siman, sida cajaladaha yaryar, waxaana lagu cunaa waxa ugu horreeya ee subaxa hore la sameeyo iyadoo leh shukulaatada ama miraha.
Keega waxaa ka buuxa hilib doofaar xilliyeysan. Iyagu waa nooc ka mid ah kuwa caanka ah siyopao ama "bun kulul" oo ay Filibiinku cunaan saamaynta Shiinaha darteed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cunto karinta Puto, mid ka mid ah waxyaabaha ugu macaan ee Filipino